पच्चीस प्रतिशत महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी
हिमालय खबर , ११ आश्विन २०७५, बिहीबार - बाँकेका २५ प्रतिशत महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी गराउने गरेका छन् । नियमितरुपमा गभर्वती चेकजाँच गराई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुने महिलालाई सरकारले आर्थिक अनुदानदेखि विभिन्न सहयोगका कार्यक्रम गर्द ...
चितवनमा दुई महिनामा १४५ जनालाई स्क्रब टाइफस
हिमालय खबर , १ आश्विन २०७५, सोमबार - चितवन । जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा १४५ जनामा स्क्रब टाइफसको संक्रमण भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार ८०२ जनाको रगत परीक्षण गरिएकामा ...
हिमालय खबर , २४ भाद्र २०७५, आईतवार - चितवन । करेत सर्पले टोकेर उपचारका लागि भरतपुर ल्याइएका भरतपुर–१५, मंगलपुरका तीन वर्षीय बालक सलिन विकको अस्पतालकै त्रुटिबाट मृत्यु भएको देखिएको छ । भदौ २० गते सर्पले टोकेर ल्याइएका बालकला ...
हिमालय खबर , ८ भाद्र २०७५, शुक्रबार - काठमाडौँ । प्रजनन स्वास्थ्यको कमजोरी (रुग्णता) देखाएर श्रीमान््श्रीमतीमध्ये कसैले पनि एक अर्कालाई घरबाट निकाल्न, विस्थापित गर्न र सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा गराउन नपाइने भएको छ । सङ्घीय संस ...
बीमा गराउनेभन्दा माग दाबी बढी
हिमालय खबर , ३ भाद्र २०७५, आईतवार - चितवन । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा बीमा गर्ने भन्दा बीमा मार्फत उपचार गराउनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको छ । बाहिरी जिल्लामा बीमा गराएर यहाँ उपचार गराउने आउने भएकाले ...
चिकित्सकको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन हुने
हिमालय खबर , ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार - काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि लागू हुन थालेको मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ मा चिकित्सकको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने जनाएको छ । चिकि ...
भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीयस्तरको बनाउन गृहकार्य : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
हिमालय खबर , २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार - भरतपुर । उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले भरतपुर अस्पताललाई केन्द्रीयस्तरको अस्पतालको रुपमा विकास गर्न छलफल र गृहकार्य भैरहेको बताएका छन् । शनिबार भरतपुर विमानस्थलमा ...
पुराना साहित्यकार एवम् रेडियोकर्मी दाहाल यज्ञनिधि रहेनन्
हिमालय खबर , २५ श्रावण २०७५, शुक्रबार - काठमाडौँ । शुक्रबार बिहान माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा दाहाल यज्ञनिधिका आफन्त र शुभेच्छुकहरु निराश स्थितिमा भेटिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नियमित डायलासिसका २३ वर्ष बिताएका स ...
हिमालय खबर , २१ श्रावण २०७५, सोमबार - काठमाडौँ । सुन्दा अचम्म लागन सक्छ, गर्भभित्रको बचचाले पनि कहीँ अंश पाउँछ ? हालसम्म सगोलको सम्पति बच्चा जन्मिएपछिमात्रै भागबण्डा लगाउने गरिन्थ्यो । तर, अब भने बच्चाले आमाको गर्भमा रहँदा नै अंश पाउने ...
अस्पतालको लापर्वाहीले पत्रकार थपलियाको निधन भएको जनाउँदै उजुरी
हिमालय खबर , १६ श्रावण २०७५, बुधबार - काठमाडौँ । पत्रकार एवं साहित्यकार यादव थपलियाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापर्वाहीका कारण मृत्यु भएको भनी उनकी श्रीमती गंगा खतिवडाले छानबिनका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएकी छन ...
डा. आचार्यको नियुक्ति विधि सम्मत
हिमालय खबर , १३ श्रावण २०७५, आईतवार - चितवन । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भएको विवाद टुङ्गिएको छ । क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले वि ...
डा केसी र सरकारी पक्षबीच वार्ता सुरु
हिमालय खबर , ९ श्रावण २०७५, बुधबार - काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका सात सूत्रीय माग राख्दै २६ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका डा। गोविन्द केसीले उठाएका विभिन्न मागका विषयमा बुधबार वार्ता सुरु भएको छ । सरकारी पक्ष र डा के ...
पूर्वराष्ट्रपति यादवले लिए डा केसीको स्वास्थ्यबारे जानकारी
हिमालय खबर , ७ श्रावण २०७५, सोमबार - काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव शिक्षण अस्पताल पुगेर अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । डा यादवले वरिष्ठ चिकित्सक केसीको मागलाई वार्तामार्फत् छिट ...
डा केसीलाई भेट्न सभापति देउवा शिक्षण अस्पतालमा
हिमालय खबर , ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार - काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगी अनशनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सो अवसरमा उनले डा केसीको स ...
हिमालय खबर , ३ श्रावण २०७५, बिहीबार - काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लामा अनशनरत चिकित्सक गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर नभएको जनाएको छ । संघले आज पत्रकार सम्मलेन गर्दै १९ दिनदेखि अनशनरत केसीको जीवनरक्षाका ...